Xafladii Caawo Iyo Liyuuga. - Cakaara News
Xafladii Caawo Iyo Liyuuga.
Jijiga(CN) jimce, 8da, January, 2016, Xaflad balaadhan oo si meeqaam sare ah loo soo agaasimay oo loo qabtay soo xidhitaankii qiimayntii ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI iyo guulaha waawayn ee ay ciidanka booliska gaarka ah soo hooyeen 6 bilood ee ugu danbaysay ayaa ka dhacday hoolka wayn ee shirarka ee ku yaala xarunta madaxtooyada cusub ee DDSI.
Xafladan oo ahayd mid aan loo kala hadhin ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta xukuumada DDSI ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne ku xigeenada DDSI, golaha wasiirada, dhamaan shaqaalaha xafiisyada heer deegaan, odayaal dhaqameedka deegaanka, culimo awdiinka, ganacsatada, ururada dhalinyarada, saraakiisha ciidamada booliska gaarka ah ee DDSI iyo dhamaan kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI oo ay ka mid ahaayeen kooxda fanka iyo suuganta Gabi band oo ka timiday gobolka siti.
Waxaana xafladan ugu horayntii ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI General Cabdiraxmaan Cabdilaahi Buraale. oo warbixiyay guulaha balaadhan ee ay ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI ka soo hooyeen dalka iyo dalka dibadiisaba gaar ahaan wadanka somaliya ee aan dariska nahay oo ay guulo lama ilaawaan ah ka soo hooyeen la dagaalanka ururka argagixisada ah ee alqushaash . wuxuuna janaraalku sheegay in qiimaynta hadda loo soo xidhay ciidanka booliska gaarka ah tahay mid 6dii biloodba mar diirada la saaro waxqabadka ciidanka gaarka ah ee DDSI.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xafladaasi ka soo jeediyay khudbad aad u dheer oo ku salaysan guulaha ay ciidanka booliska gaarka ah soo hooyeen iyo guud ahaanba horumarka balaadhan ee ka hirgalay deegaanka, wuxuuna sheegay madaxwaynuhu in waxqabadka ciidanka booliska gaarka ah ku salaysan yahay qorshe iyo isla xisaabtan, qiimaynta hadda loo soo xidhay ciidankuna tahay mid hal beegeedu tahay waxqabad. isaga oo tilmaamay madaxwaynuhu guulaha ay ka soo hoyeen ciidanku dhinacyada nabadgalyada dalka iyo gudaha dalka soomaliya, dhinaca horumarka iyo xidhiidhka dadwaynaha, isaga oo sheegay madaxwaynuhu in ay xafladani hordhac u tahay munaasabada balaadhan oo dhawaan la qabandoono taasi oo ay dhamaanba hay'adaha dawlada qaabdhismeedkooda kala duwani ku soo bandhigidoonaan waxqabadkooda.
Mar uu ka hadlayay madaxwaynuhu sii xoojinta dhinaca horumarka ayaa waxa uu sheegay in ay xukuumada DDSI iyo shacabka deegaankuba hada xooga saareen dhinaca wax soo saarka beeraha tar tana loogu jiro sidii loo sii xoojinta dhinaca wax soo saarka beeraha taasina ay tahay jihooyinka lagu gaadhayo horumar buuxa.sidoo kale madaxwaynuhu mar uu ka hadlayay dhinaca shaqaalaha dawlada ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin shaqaaluhu cududa hirgalisay horumarka xawliga ah ee ka hirgalay deegaanka loogana baahan yahay in ay sii xoojiyaan waxqabadka fulinta qorshayasha horumarineed, wuxuuna sheegay madaxwaynuhu in layskula xisaabtami shaqsikasta, xafiiskasta, wakaalad iyo shirkad waliba waxay qabtay oo kaliya.
Garaad Kulmiye Garaad Maxamuud Garaad Dool oo ku hadlayay afka odayaasha deegaanka ayaa si qoto dheer uga warbixiyay waxqabadka balaadhan ee ciidanka booliska gaarka ah wuxuuna sheegay in ay shacabka ka fujiyeen cadawgii sida gofonaha u jaqayay dhiigooda, isaga oo sheegay in ay yihiin ciidan shacabk oo markii ay nabadii xasiliyeen hadda ka qayb qaadanaya horumarka wuxuuna tilmaamay kaalinta wayn ee ay ka gaysteen waxka qabadka xaalada abaaraha gobolka siti gar-gaaarkii ay shacabka u fidiyeen.
Gabagabadii xaflada ayaa ciidanka baanboyda DDSI waxay gaardo ka ciyaarku soo bandhigeen barxada wayn xarunta madaxtooyada dhexdeeda taasi oo si wayn u soo jiidatay masuuliyiintii iyo qaybihii kala duwanaa ee ka soo qaybgalay xaflada. waana markii ugu horaysay abid ciidanka baanboyda ay leedahay DDSI ku soo bandhigaan gaarto ka ciyaar noocan oo kale ah, waana ciidankii ugu horeeyay ee u soo qalin jabiya DDSI oo ah banboy ah.